Baahida iyo Doonista! | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdixakiim-Tiyari Cabdillaahi Aaden — January 29, 2020
“Haddaad Jamato geed adag Oo aad heyn wax kuu jar Jabin meyso gacantuye!”.
Baahida iyo doonistu waa laba wax oo kala duwan. Inaad hawo, ammaan iyo biyo hesho waa wax aad u baahan tahay. Intaas ba wax jaangooya: waqtiga, lacagta, baahida iyo xaaladda. Kheyraad ka dunida yaal ma kafeynayo doonista bini’aadam ka, doonista iyo rabitaanka Ilma Xaawa na, bar-dhammaad ma laha, si haddaba, kheyraadka dunida yaal uu inooga filnaado, caqabado-nololeed oo hakinaya damaca bini’aadam ka waa la ga maarmaan.
Qofkasta wuxuu sameeya go’aan uu kala doorano waxkasta, kaas oo ku jaan go’an: baahidiisa, lacagta uu heysto, iyo waqtiga. Waqtigu wuxuu xaddidan yahay, wareegga dharraaruhu na waa 24 saacadood; suurogal ma aha in hal caano-maal – seexato 24 saacadood, 24 saacadood na shaqeyso. 24 saacadood waa in aad qeysbiso, badh na seexato, badh na shaqeysato, badh na aad hawlo kale ku bixiso. Sidaas oo ay tahay, dakhliga jeebkaaga ku jira isna, waa halbeeg cabbirayo, taagtaada dookha iyo doonistaada.
Tusaale ahaan, ruuxa doonayo inuu qoys dhiso, sidoo kalena, abuuro ganacsi u gaar ah, is-barbardhiga labadaas go’aan, kaddib wuxu go’aan ku gaadhey, inuu ganacsi abuuro uu ka wanaagsan yahay qoys yagleelistiisa, go’aan kaas uu gaadhey, waa fursadda uu ku doortey qiime — kaas oo loo yaqaan ‘ fursadda Dahabiga ah ama Jaaniska qushuuciga / Opportunity Cost’.
Midka uu lumiyey ee ah inuu guurkaas uu ka doortey ganacsi, isna waxaa ka soo gaadhey Khasaare ku qotoma muddadii uu xidhiidka la jilayey inanta, muddaadaas oo iyana loo yaqaan ‘ Fursadda luntey / Sunk Cost’, taas oo aan soo laabaney, la na mid noqoneysaa ‘Caano qubtey qabasho ma leh/ There’s no sense crying over spilt milk.”
Taajirnnimada dadka qaar gaadhaan, waa doorasha ay ku salleeyeen Fursadda qushuuciga ah ee markaas taagneyd, iyagoo ka fekerayey, si maan-saxninimo ku qotonta, qiimaha dahabiga ee waxaasi mustaqbalka dhali doonaan. Dadka noocan ahi, inta badan doorashada is-weydaarsan, ee aan midho dhalka qumman laheyn, ma tixgeliyaan. Laakin qofka Soomaaliga ah, waxkasta oo uu doonayo, wuu u baahan yahay, waa ta keentey innago kala dakhli ah, haddana isku si u nool, isku si wax u iibsado, isku..Isku..!!!
“Waxkasta uma u baahnid, waxkasta na ma dooneysid, wixii aad u baahan tahay uun baad dooneysaa”. Heesaha Soomaaliga ah, mid kamid ah bey waxey odhaneysaa:
“Ha ka deyrin abidkaa
Noloshaad la deristahay
Ha u doodin mid kale
Oo ku dayasho mudan”.
Falsafadda halkan ku jirtaa waa mid tibaaxeysa mawduuceenna guud ahaan, nolosha aad la deriska tahay, waxey muraayad u tahay waayahaaga dhabta ah, gaar ahaanna, midda aad u doodeyso, waa rabitaankaaga khiyaaliga ah ee la jaalka ah — damaca aan xadka laheyn ee innagu abuurin, kolkaad khiyaaliga run la mood ah gaadh is-tidhaahdo, ayaad gadaal ka xasuusani, heeskii kale ee Qaraamka ahaa ee odhaneyey:
“Haddaad Jamato geed adag
Oo aad heyn wax kuu jar
Jabin meyso gacantuye!”.
Qof, dawlad, iyo shirkad ba, qorshayaasha maalin la ah ayey ku salleeyaan doorasho qorsheysan oo fursadda dahabiga tilmaameysaa. Kolkaad ku jirto doorasha ah ‘Laba daran mid doorana /Dillema’ jaaniska aad mid ahaan ku doorato, ayaa noqonaya ‘Fursadda Dahabiga’.
Tags: Baahida iyo Doonista!
Next post Waa Maxay ‘Tariff?
Previous post Guurka iyo Dhaqaalaha